How to rank products in Amazon from the beginning?
Mutengesi mumwe nomumwe anofanirwa kuziva nzira yekugadzira michina muAmazon kubva pazuva rokutanga rokutengesa uko. Uye kuti zvive zvakanaka mumisika iyoyo yakawanda chaizvo, mutengesi wese anofanirwa kuenderera mberi nekuenderera mberi kwekutsvaga shanduro yegorgorithm (inozivikanwawo seA9). Kunyange zvakadaro, kune imwe nheyo yemitemo inoshanda yakakodzera panguva iyo kuti ibatsirwe kubva, kunyanya kana iwe uri mutsva kuAmai optimization. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidzira maitiro ekugadzira michina yeAmazon sep pro, kusazvidza kana iwe wakatova nehumwe ruzivo mundima iyi kana kwete zvachose - tank series e cigarette. Zvakanaka, ngatitsvakei munyaya yacho nenzira yechinhu chakareruka uye chakareruka nhungamiro yezvikamu.
Nzira dzekuongororwa mazai muAmerica
Nhanho imwe: Ziva Zvaunokwanisa Kuwana Mashoko
iwe unofanirwa kugadzirira sarudzo huru yepamusoro yekuita mazwi makuru uye marefu-muswe mishandiso yemitauro inobatsira pane chinhu chako kana chikwata. Chinhu chacho ndechokuti iwe unoda kuwana avo vane mhando dzakakwirira dzekutsvaga, sezvo zviitiko zvako zvekutengesa zviri kunyanya kutengesa pavari. Nzira yakareruka yokunzwisisa maitiro ekugadzirisa michina yeAmazon nokuda kwemashoko echokwadi ari kushanyira yako yega tab neSeller Central Keywords. Nenzira iyo, iwe uchawana mufananidzo mukuru werwinyorwa rako rukuru rwemashoko makuru mazwi iwe uri kuzogadzirisa zvishoma gare gare.
Nhanho yechipiri: Ongorora Zuva Rako Rokupedzisira Namashoko
Kana wapedza kunzwisisa kwemashoko ako ekutanga kutsvaga uye general shopper chinangwa, inguva yekuvandudza runyoro rukuru. Ndinoreva kuti iwe unofanirwa kubvisa zvose zvisiri izvo-izvo-zvinovimbisa mazwi makuru uye marefu-misa mazwi kuti uchengetedze chete-unofanira kukunda. Heino chinhu chikuru chinyorwa chekuti iwe uwane kickstart ne. Inzwa wakasununguka kuti uedze pakarepo, kunyanya nokuti yakange ichishandisa-yakaratidza simba kune zvangu zvakagadzirwa nekugadzirwa kwepamusoro pa Amazon.
Sonar - ishoko guru rekutsvakurudza izwi rinonyanya kuenderana nevekutengesa ecommerce. Sonar inogona kukubatsira kuti unzwisise maitiro ekugadzira michina yeAsia nekusimbisa yako chigadzirwa chekuwedzera kugadzirisa nezvose zvinokosha mazwi iwe zvichida unoda kutarisa. Zvose zvaunoda pano ndeyokuzadza chinonyanya kukosha chinyorwa-uye zvinowanzoita zvose zvinoda kuti zvive zvakanakisisa kubudirira mukuita, zvakadai sekufungidzirwa kwekutsvaga kwekutsvaga, nheyo huru yezvinyorwa zvinyorwa, ikozvino kuchinja kwevashandi vavo chaivo vanoshambadzira vanotenga kuAmazon, uye mazwi anokosha mazano mazano akatora zvakananga kubva kumatambo akakurudzira vatengesi vanoshanda ipapo.
Danho rechitatu: Ipai Simba Kukutora Kwako Kushandurwa
Kufunga kuti kuwandisa kushandurwa kwakaverengwa kuAmerica main page inofungidzirwa kusvika 13%, iwe unofanira kuwana CTR yakakwirira-yekutengeserana yako pachako mazita kuitira kuti chigadzirwa chako chekutsvaga chikwata chinotanga kukura zvakare. Heano mamwe mazano ekutanga kuti iwe utange kuchinja huwandu hwevatengi muvatengi chaivo:
Ita tsananguro inogadzirisa yemuviri yakazara nemashoko ako-unofanira kukunda kuitira kuti parege kuva nemibvunzo kune mutengi kuriverenga.
Wedzerai mifananidzo yakachena uye yakajeka yepamusoro-soro, pamwe chete nemifananidzo yakaenzanisira, mavhidhiyo uye chero ipi zvayo nzira dzinotarisa maziso ezvehupenyu zvinobatsira nekunyorera tsanangudzo yemiti. Zano: Zvakanaka, iwe unofanirwa kubvumira kutsvaga kwekutsvaga kwako kwezvigadzirwa zvemifananidzo - inogara ichibhadhara, zvechokwadi.
inotsanangura zvakajeka kuti chii chinoita kuti chigadzirwa chako chishamiswe. Kana zvichibvira, ita zvose zvaunogona kuti uise sehuwandu hwepakati pechitatu yekambani mhinduro sezvaunokwanisa. Pakupedzisira, usambozeza kumhanya nenzira yakaoma yekuongorora A / B kuti uongorore hutano hwakasiyana-siyana uye unzwisise chii chinoshanda zvakanaka kwauri, uye chii chinofanira kunge chichigadziriswa zvakare kana kuti chinosungirirwa kuitira.